दायाँ खान कसरी जान्न, हामी स्वस्थ र उचित खाना, टिभि, हामी रेडियो सुन्न हरेक दिन मा बुक गर्न सिकाउनुभयो, तर केही मानिसहरूले यो महत्त्वपूर्ण मुद्दा सोच्न। सबै को पहिलो, स्वास्थ्य र सौन्दर्य को ग्यारेन्टी - एक स्वस्थ नाश्ता। तपाईं दिन सुरु रूपमा, वा बरु तपाईं नास्ता लागि के खाने, त्यसैले यसलाई खर्च।
अर्डर वजन मा बिहान खान, वा जानीबुझी छोड्न नास्ता चाहनुहुन्छ नगर्ने ती - नराम्ररी गलत छन्। बिहान पछि - पछि शरीर समस्या क्षेत्रमा सौतेली छ जो बोसो भन्दा ऊर्जा मा भोजन को रूपान्तरण लागि सबैभन्दा opportune समय छ। nutritionists अनुसार, नियमित र स्वस्थ नाश्ता वजन उचित हानि गर्न प्रमुख छ। यो कारणले गर्दा तथ्यलाई छ सम्म दिउँसो चयापचय पछि भन्दा बढी तीव्र हुन्छ। त्यसैले, बिहान हाम्रो शरीरमा प्रवेश कि धेरै क्यालोरी सबै जलेको। यो पक्कै पनि भोजन सुरक्षित मिठाई मा भोजमा अघि सकेसम्म मीठो मन गर्नेहरूका लागि ठूलो प्लस छ। निस्सन्देह, यो एक स्वस्थ नाश्ता प्रतिस्थापन हुँदैन। यो "पुस" दिन सबै आवश्यक पोषक हाम्रो शरीर nourishes किनभने एक सफल र सक्रिय दिन सुरु गर्न।
यहाँ हामी नास्ता लागि, स्वस्थ भोजन बारेमा कुरा गर्दै छन्। र कसरी हाम्रो स्वस्थ नाश्ता जस्तो हुनुपर्छ?
दूध, अन्डा, फलफूल र अनाज: त्यसैले, यो कसरी vitally आवश्यक नियमहरू सिक्न आवश्यक छ। यी उत्पादन, जो भित्र आफ्नो स्वस्थ नाश्ता स्पिन गर्न आवश्यक छ।
ठीक छ, बिहान एक कप कफी सुरु यदि छैन, सामान्य रूपमा र porridge को प्लेट संग। दलिया सक्षम envelop हाम्रो आंतों पर्खाल, जसबाट पाचन सुधार र क्रमशः हुनुको। बरु दलिया वा अनाज को कुनै पनि अन्य हुन सक्छ। यो कुनै आश्चर्य छ, दूध संग porridge पकाउन एउटा बच्चाको रूपमा मेरो आमा सम्झना तपाईं खानाको खुवाउन उपयोगी छ।
डेयरी उत्पादन लागि जाँदा, त्यहाँ भिन्न धेरै छ। यो एक टुक्रा हुन सक्छ पनीर (पनीर प्रोटिन, क्याल्सियम र खनिज मा धनी छ), रोटी र मक्खन (तर ससेज बिना ससेज - हानिकारक छ), kefir वा दही एक गिलास (तपाईं बोसो दही वा kefir किन्न सक्छन्, यो राम्रो Fed छ)। घरेलु पनिर यो, फल वा जामुन संग तयार गर्न सकिन्छ भिटामिन मिश्रण प्राप्त, धेरै उपयोगी छ।
नास्ता लागि फल खान प्रयास गर्नुहोस्। तिनीहरूले भिटामिन, कार्बोहाइड्रेट र खनिज को धेरै छ। फल फल को रस प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। उपयोगी स्याउ, सुन्ताला, नाशपाती, अंगूर, र धेरै अन्य। को जामुन भूल छैन, तिनीहरूले वातावरण को हानिकारक प्रभाव हाम्रो शरीर रक्षा गर्ने एंटीओक्सिडेंट को धेरै समावेश गर्दछ। यो स्ट्रबेरी Blackberries, स्ट्रबेरी, raspberries, ब्लूबेरी र शीर्षक को एक विशाल संख्या। तिनीहरूले खाएको गर्न सकिन्छ शुद्ध फारम वा दही को रूप मा या त। सामान्यतया दूध + फल संयोजन म दिन खुसीसाथ सुरु लागि आदर्श पाउन।
अन्डा - यो साधारण अलग मुद्दा, लाभ तिनीहरूले endlessly लामो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ किनभने छ। यो भिटामिन को एक वास्तविक गोदाम छ र, र खनिज, र प्रोटीन र कार्बोहाइड्रेट (त्यहाँ अन्डा को संरचना मा 12 शीर्षक हो)। नास्ता लागि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ बाफ omelettes दूध वा बस अन्डा पकाउन।
सम्झना व्यक्ति कि जो सही बिहान नास्ता:
- सधैं राम्रो मुडमा;
- यो समर्थन सामान्य वजन र इच्छित भने, वजन गर्न सजिलो;
- lunchtime (यो रोल, चकलेट, किसिमका अघि हानिकारक snacking बिना गर्न सक्छन् ससेज स्यान्डविच र कफी);
- यो सफल दिन सुरु गर्न आवश्यक छ कि पोषक आफ्नो शरीर प्रदान गर्दछ।
र अर्को टिप, तपाईं बिहान मासु चाहनुहुन्छ भने, यो एक चिकन वा टर्की त, मासु यी प्रकारका जीव लागि धेरै उपयोगी आहार हो र पनि हुन सक्छ।
खैर, अब तपाईं नास्ता कसरी खाना पकाउन र काम दिन भर ऊर्जावान हुन थाहा! स्वस्थ रहन र बस सही खाना खान!
Whiting माछा: लाभ र समुद्री को हानि
बच्चाहरु को लागि ड्राई र भिजेको खोकी बाट लागूऔषधको सूची। एक वर्ष देखि बच्चाहरु को लागि चिकित्सा खोकी। बच्चाहरु को लागि Expectorants
केक "फूल को फूलगुच्छा": मास्टर वर्ग, फोटो
कोठामा सही तरिकामा वालपेपर छान्नुहोस्
मा सुई Guessing: कसरी र के तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ
Gediminas टावर: इतिहास, डिजाइन सुविधाहरू, मूल्य
बच्चाहरु को लागि Flannel डायपर: फोटो आकार